कसरी ट्रेन यात्रा सही तरीकाले गर्ने | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कसरी ट्रेन यात्रा सही तरीकाले गर्ने
निराशा र समय बर्बाद तत्व एयर्पोर्ट चेक-इन कतारहरू र एयरपोर्टमा ट्राफिक जाम सबै राम्ररी परिचित छन् व्यावसायिक यात्री. तपाईं छोटो जाँदै हुनुहुन्छ कि बिना रेल द्वारा व्यापार यात्रा या धेरै घन्टा वा दिन हुनेछ भनी लामो एक, रेल व्यापार यात्रा अक्सर यात्रा को अन्य प्रकारका भन्दा सस्ता र छिटो छ. तर गति र लागत मात्र लाभ छैन रेल यात्रा को. सबै लाभ हेर्नुहोस् तल.
अनुसन्धान प्रकट लोकप्रिय कि व्यापार-सम्बन्धित यात्रा विधि रेल द्वारा छ, हावा र किराया कार यात्रा विरुद्ध. रेल व्यापार यात्रा हो परिवहन को तेज मोड यस यात्राको को भन्दा आधा लागि (एक पटक हवाई चेक-इन र आगमन समय ध्यानमा राखिएको थियो) र लगभग एक पाँचौं लागत मूल्य उडान र तेस्रो को को ड्राइभिङ तपाईंको गन्तव्यमा.
व्यावसायिक यात्री र कर्पोरेट यात्रा क्रेताहरूसँग छ यात्रा लागत कटौती गर्ने अवसर पनि थप र यात्री लागि सकेसम्म सुविधाजनक यात्रा बनाउँछ तरिकामा पुस्तक टिकट. प्रयास अनलाइन रेल टिकट बुकिंग संग SaveATrain र अग्रिम योजना अचम्मको सम्झौताहरू प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो!
तपाईंको समयलाई अधिकतम गर्नुहोस् जब ट्रेन व्यवसाय यात्रा:
जब तपाईं रेल द्वारा यात्रा तपाईं एक बुक गर्न विकल्प हुनेछ अग्रिम तालिका सीट जो तपाईं यात्रा गर्दै गर्दा काम राख्न सक्छन् भन्ने हो, कार्यालय बाहिर आफ्नो समय ठूलोपारिदैँछ!
तपाईंको नवीनतम जाँच यात्रा जानकारी अनलाइन वा दर्ता एसएमएस सूचनाहरूको लागि. तपाईं को लागि छोडेर अघि एन मार्ग कुनै पनि ढिलाइ वा समस्या को सूचित गरिनेछ स्टेशन.
रेल व्यापार यात्रा Lounges:
केही रेल स्टेशन व्यापार वर्ग lounges प्राथमिकता ग्राहकहरु आराम र पहुँच वाइफाइ र काम स्पेस गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ प्रस्ताव. एक बिट प्रारम्भिक आफ्नो यात्राको लागि आइपुगेपछि? ती रिक्त स्थान फाइदा लिन प्राप्त केही काम तपाईंले प्रतीक्षा गर्दा गरेको गर्न.
एम्स्टर्डम गाडिहरु गर्न कोलोन
Train travel can offer many facility-based advantages for its व्यावसायिक यात्री. यो एउटा उदाहरण मा-स्टेशन र-रेल वाइफाइ समावेश गर्न सक्छ. यो सम्पर्कमा रहन यात्रु सक्षम जबकि कदम मा. कुरा हो सम्भव छैन कार द्वारा यात्रा भने जो.
लन्डन गाडिहरु गर्न Schiphol
दायाँ आफ्नो रेल व्यापार यात्रा सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक अनलाइन आफ्नो रेल टिकट खरीद प्रयोग गरेर छ सुरक्षित-एक-ट्रेन !
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-business-travel%2F%0A%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#businesstravel #रेल्वे स्टेशन longtrainjourneys रेल यात्रा रेल यात्रा यात्रा traveltips